Moa ve ny voan-javamaniry Avocado hohanina? Misy poizina ve izy ireo?
Science Chemistry amin'ny fiainana andavanandro
Ny avocados dia ampahany lehibe amin'ny sakafo mahasalama, fa ny momba ny voa na ny lavany? Ahitana karazana toaka kely antsoina hoe persin [( R , 12 Z , 15 Z ) -2-Hydroxy-4-oxohenicosa-12,15-dienyl acetate]. Persin dia solon-tsakafo tsy hita maso hita ao amin'ny ravina sy hoditra avy amin'ny zavamaniry avocado ary koa ny lavaka. Mihetsika toy ny fungicide voajanahary izy io. Na dia tsy ampy ny habetsaky ny persine amin'ny lavaka avocado aza dia manimba ny olona, ​​zavamaniry sy lavaka avocado dia mety hanimba biby fiompy sy biby fiompy.
Ny saka sy ny alika dia mety ho marary kely amin'ny fihinanana nofo na voan-kafe avocado. Satria be fibrous ny lavaka, dia mety hampidi-doza ihany koa izy ireny. Ny lozam-pifamoivoizana dia heverina ho toy ny vorona, omby, soavaly, bitro, ary osy.
Ny pitsopitsony avocado koa dia miteraka olana ho an'ny olona izay tsy dia mahazatra loatra amin'ny latina. Raha tsy zakanao ny akondro na ny tsimokaretina, dia tsara ny manalavitra ny voaniho avocado. Ny masomboly dia manana tandrify tondraka, fitsaboana trypsin, ary polyphenols izay manohitra ny fiterahana, izay midika fa mampihena ny fahafahanao mihinana vitaminina sy mineraly sasany.
Ankoatra ny persine sy ny taninina, ny voanio avocado dia misy ihany koa ny siny kely amin'ny asidra hydrocyanic sy ny glycoside cyanogenic, izay afaka mitondra cyanide toaka . Ny karazana masomboly misy ny firaisana cyanoogenic dia ahitana voamaina apokaly , voanio kirihitra , ary voan'ny voankazo voan'ny siramamy. Na izany aza, ny vatan'olombelona dia afaka manala vidy kely amin'ny vovobony, noho izany dia tsy misy ny fisian'ny tsiranoka manapoizina amin'ny olon-dehibe tsy hihinana voa iray.
Ny Persin dia mety miteraka apoptose amin'ny karazana sela avy amin'ny homamiadana, ary mampivoatra ny vokatra cytotoxika amin'ny tamoxifen. Na izany aza, ny varo-boba dia tsy azo atao amin'ny solika fa tsy rano, koa mila fikarohana fanampiny mba hahitana raha azo avy amin'ny voa azo avy amin'ny voa azo atao.
Ny Komitin'ny Avaratry ny California Avocado dia manoro hevitra ny olona hisoroka ny fihinanana voaniho (na dia mamporisika anao aza izy ireo mba hankafy ilay voankazo).
Na dia marina aza fa misy fitambaram-pahasalamana mahasalama amin'ny voa, anisan'izany ny fibres-po, vitamin E sy C , ary ny phosphorus mineraly, ny fikarohana dia mila fikarohana bebe kokoa mba hamaritana raha mahasoa ny fihinanana azy ireo.
Ahoana ny fomba hanamboarana menaka voamadinika avocado
Raha manapa-kevitra ny handroso ianao ary hanandrana ireo voanio avocado, ny iray amin'ireo fomba malaza indrindra hanomanana azy dia ny fanaovana vovoka. Ny vovony dia afaka mifangaro amin'ny fofona na sakafo hafa mba hanova endrika ny tsiran-tsakafo, izay avy amin'ny tasy ao amin'ny voa.
Manaova vovobony voan-kafe voavoatra, alao ny lavaka amin'ny voankazo, apetraho eo amin'ny tavin-tsakafo, ary arotsaho ao anaty lavaka fantson-kitay mandritra ny 250 ka hatramin'ny 1.5 ka hatramin'ny 2 ora.
Amin'izao fotoana izao, ny hoditry ny voa dia ho maina. Atsaharo ny hoditra ary atsipazo ny voa ao anaty lasantsy na sakafo. Ny voa dia matanjaka sy mavesatra, noho izany dia tsy natao ho an'ny blower izany. Afaka manodina azy amin'ny tanana ihany koa ianao.
Ahoana ny fomba hanamboarana rano voajanahary
Ny fomba iray hafa hampiasana voanio avocado dia ny "voanio voanio". Mba hanaovana izany, mash 1-2 avocado ambioka ary manindrona azy anaty rano mandritra ny alina. Azo ahitra anaty ranom-boankazo ny voa nafangaro. Azo ampiasaina amin'ny kafe na dite na ny smoothie ny voan-javamaniry avocado, toy ny voankazo voajanahary avocado.
AJ, Roberts CG, Seawright AA, Oelrichs PB, MacLeod JK, Liaw TY, Kavallaris M, Somers-Edgar TJ, Lehrbach GM, Watts CK, Sutherland RL (2006).
"Ny zavamaniry misy poizina, persine, miaraka amin'ny vivo atao any amin'ny tovovavy, dia miteraka apoptose Bim ao amin'ny sela misy kanseran'ny nono". Mol Cancer 5 (9): 2300-9.
Roberts CG, Gurisik E, Biden TJ, Sutherland RL, Butt AJ (Oktobra 2007). "Ny cytotoxic synergistika eo anelanelan'ny tamoxifen sy ny toxin-tovovan'ny zavamaniry ao amin'ny sela misy sela marefo dia miankina amin'ny fitenenan'i Bim ary mandalo amin'ny fanodinana metabolisma ceramida". Mol. Kanserany. 6 (10).
Misy vokany amin'ny hafanam-po ve ny atmosfera?
Ireo singa mahazatra sy ny toerana hahitana azy ireo
Melting Point versus hafahafa
Fanoloana menaka fanadiovana sy Baking Soda
Ahoana ny fomba hanovana ny zezika Yolk Color
Ny siansa momba ny nicotine sy ny lanjany
Valin'ny fahalemena (Valin'ny fanontaniana mahazatra)
Ohatrinona ny Medaly Volamena Olaimpika?
Fanitsiana mpanamboatra mofomamy
Ahoana no hanesanao fanakanana?
Asa momba ny simenitra
Ny ady ady
Fitaizan-janaka - Fanadihadiana momba ny sekoly
Kalandrie Katolika Liturgy
Fomba hanolorana rano amin'ny herinaratra elektrônika
Fandalinana ny teny Mandariny isan'andro: "aiza" amin'ny teny Sinoa
Ny fananganana ny New York Stock Exchange, ny Building Building ao NYC
Fotoana hamadihana ny Marijuana? - 500+ ireo manam-pahaizana manohana ny fanarahan-dalàna Marijuana
Iza no nanamboatra ny lava?
Famolavolana fahaizan'ny mpilalao sarimihetsika - Mahaiza mamolavola anao
Ahoana no fomba hanohanana ny faniriana ara-nofo amin'ny fifandraisanao
10 Fitsarana ny Fitsarana Tampon'i Etazonia
Teny Khalsa Arabo ho an'ny Pure
Ny Fitsarana Avo dia miteny
Inona no tokony ho fantatrao momba an'i Zeosy, Grika Andriamanitra?
Ny fandrobana ny surf
Fomba handaminana fanamarihana fikarohana
Anarana iombonana amin'ny teny espaniola
Hira Fiderana an-dalambe tsara indrindra
10 Ireo toetra mampiavaka ny Mpianatra Lehibe
Tongotry Twisters ho an'ny mpianatra ESL
Famaritana ny toerana sy ny hetsika
Teny nalaina mampiseho ny tena maha izy azy
5 Zavatra Manangana Kapitalisma "Global"
Ny Gun dia mampiseho lalàna avy amin'ny fanjakana
Famaritana sy ohatr'olombelona
3 amin'ny safidy tsara indrindra an-tserasera an-tserasera